Erotophobia ma ọ bụ egwu nke inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ | Bezzia
Erotophobia ma ọ bụ egwu nke inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ
Maria José Roldan | 11/01/2022 22:24 | Mmekọahụ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ijuanya na ihe ọhụrụ. enwere ndị nwere ike ịmalite ịtụ egwu iso onye ha na-emekọ ihe. A maara ụdị phobia a site n'aha erotophobia na ọ na-emekarị site na obere ka ọ dịkwuo. Onye na-enwe ụdị phobia dị otú ahụ na-amalite site na ụfọdụ enweghị ntụkwasị obi ma a bịa n'inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ na ka oge na-aga, egwu nke inwe mmekọahụ na-aghọwanye nke ukwuu ma pụta ìhè.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-agwa gị okwu n'ụzọ zuru ezu banyere phobia nke mmekọahụ na otú o si emetụta di na nwunye na-adịghị mma.
1 Erotophobia ma ọ bụ egwu mmekọahụ
2 Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị phobia
Erotophobia ma ọ bụ egwu mmekọahụ
Ụdị phobia ma ọ bụ egwu a nwere ihe jikọrọ ya na oge chiri anya na-enwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ, karịa n'eziokwu nke mmekọahụ n'onwe ya. Onye nwere erotophobia nwere ike ime onwe ya n'enweghị nsogbu ọ bụla, nsogbu na-ebilite mgbe ya na onye òtù ọlụlụ ya na-enwe mmekọahụ. Enwere usoro ihe ịrịba ama nwere ike igosi na mmadụ nwere ụdị phobia dị otú ahụ, dị ka ahụ erughị ala mgbe ya na onye òtù ọlụlụ na-enwe mmekọahụ ma ọ bụ na-eme ihe ngọpụ iji zere oge dị otú ahụ. Ụjọ ahụ nwere ike ịdị oke mkpa na onye ahụ nwere ike ịhọrọ ịghara inwe onye ọlụlụ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị phobia
Onye na-arịa ụdị phobia a kwesịrị ịma mgbe niile, ka enwere ike imeri egwu dị otú ahụ. Ọ bụghị ihe dị mfe ma ọ bụ dị mfe iji nweta ma site n'ọchịchọ na ndidi ị nwere ike ịnụ ụtọ mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ gị ọzọ. Mgbe ahụ, anyị na-enye gị ntụziaka ụfọdụ ga-enyere gị aka imeri egwu dị otú ahụ:
E nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ụdị phobia, N'ihi na atụmanya m nwere banyere mmekọahụ ekwekọghị n'eziokwu. Iji zere nke a, ọ dị mma ịchọta banyere obi abụọ niile nwere ike inwe na ọ dị mkpa ịgakwuru ọkachamara dị ka onye na-ahụ maka mmekọahụ.
Ụfọdụ mmerụ ahụ metụtara mmekọahụ nwere ike ịbụ ihe ọzọ na-akpatakarị erotophobia. N'okwu a, ọ dị mkpa ịbanye n'aka ezigbo ọkachamara iji nyere aka dozie nsogbu dị otú ahụ. N'ihe banyere trauma. Usoro ọgwụgwọ omume nke ọgụgụ isi zuru oke maka itinye nsogbu ndị dị otú ahụ n'azụ gị na inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ gị.
Mmekọahụ gị na onye òtù ọlụlụ kwesịrị ịbụ oge ịnụ ụtọ nke ọma n'atụghị egwu ọ bụla. Ọ dị mkpa ịmara ka ị ga-esi wetuo obi ma zuru ike tupu inwe mmekọahụ dị otú ahụ. Mmekọahụ nke anụ ahụ nwere ike inye aka gbochie egwu na-ekpori ndụ ọ bụla oge nke di na nwunye.
Na nkenke, okwu banyere mmekọahụ phobia bụ nsogbu na-emetụta akụkụ dị mkpa nke ọha mmadụ. Ụfọdụ enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ nhụjuanya sitere n'oge gara aga na-ebutekarị egwu dị otú ahụ ma a bịa n'inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ. Mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ ekwesịghị ịhụ dị ka ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-enye afọ ojuju. Ọ bụrụ na ikpe ahụ na-etolite, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgakwuru ezigbo ọkachamara iji nyere aka dozie egwu dị otú ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọahụ » Erotophobia ma ọ bụ egwu nke inwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ
Pregorexia, egwu nke ibu ibu n'oge ime ime
Chọpụta aghụghọ iji tụgharịa efere ọ bụla ka ọ bụrụ ihe na-ere abụba